Dadallo dalka looga Ciribtirayo Cudurka Dabaysha oo socda – Radio Muqdisho
Xiriiriyaha Arrimaha Bini’aadannimada QM ee Soomaaliya Philipe lazzarini, U qaybsanaha Soomaaliya Hay’adda Caafimaadka Adduunka WHO iyo Mas’uuliyiin ka socotay Wasaaradda Caafimaadka ayaa maanta booqday xarumaha ay ka socdaan Ololaha ka hortagga Cudurka Dabaysha ee Magaalada Muqsisho oo billowday 4 tii bishaan.
Ugu horayn waxaa warbaahinta la hadlay U qaysanaha Soomaaliya Hay’adda Caafimadka Adduunka WHO isagoo rajo wanaagsan ka muujiyay in Soomaaliya laga Ciribtiro Qatarta Cudurka Dabaysha lixda bilood ee SooSocota.
“waxaan joogaa qaar ka mid ah kaamamka ay ka socdaan ololaha ka hortagga cudurka Dabaysha waxaan u mahad celinaya hayadaha heer Dowladeed iyo mid lookal oo Soomaaliya ka caawinaya in laga waayo kiiska Cudurka dabaysha, ololahaan Socda Waxa uu Soomaaliya ka dhigayaa in laga waayo Cudurka lixda bilood ee soosocta Soomaaliya” ayuu yiri Uqaybsanaha Hay’adda Caafimaadka Adduunka WHO ee Soomaaliya.
Iskuduwaha Caafimaadka Gobolka Banaadir Dr Cusmaan Sheekh Cabdi oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in Mas’uuliyiintaan Kormeeray goobaha ay ka socdaan ololaha ka hortagga Cudurka Dabaysha ay rajo kalinayaan Soomaaliya oo la rajaynayo in lag awayo kiiska Cudurka dabaysha.
Ololahaan lagu cirib tirayo cudurka dabaysha ayaa waxaa wada Wasaaradda Caafimaadka oo kaashanaysa Hay’adaha dhinaca Caafimaadka ka taageera Soomaaliya
R/wasaaraha oo la filayo in uu caawa ku dhawaaqo xubnaha ka harsan golihiisa wasiirrada